ဘာလီရောက်ရင် သွားသင့်ပြီး ဓါတ်ဖမ်းသင့်တဲ့နေရာများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Travel » ဘာလီရောက်ရင် သွားသင့်ပြီး ဓါတ်ဖမ်းသင့်တဲ့နေရာများ
ဘာလီရောက်ရင် သွားသင့်ပြီး ဓါတ်ဖမ်းသင့်တဲ့နေရာများ
Posted by Shar Thet Man on Jun 22, 2019 in Travel |2comments
ဘာလီဆိုတာ တကယ်တမ်းသွားလည်မယ်ဆို..၁ပတ်နဲ့လည်းမလောက်၊ ၁လလောက်နေရင်တောင် လောက်ချင်လောက်မှာ။ အဲလောက် ကျွန်းသေးလေးလေးမှာ လည်စရာတွေပြည့်နေတာပါ။ ဘာလီဆိုတာတကယ်က အရမ်းကိုလှတဲ့နေရာလေးတွေတစ်စုတစ်စည်းတည်း ရှိနေတဲ့နေရာလေးပါ.. ဘုရားကျောင်းတွေအကြောင်းပဲလေ့လာချင်သလား..ရှိတယ်။ကမ်းခြေမှာပဲ..လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်လား..အေးဆေး။ နားအေးပါးအေးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းစိမ်းစိုစိုလေးတွေပဲငေးပြီးကြည့်ချင်လား..ရတယ်။ ပြီးတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်တာဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက် instagram တို့ facebook တို့ပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့..လှလိုက်တာ..wow လို့မန့်ခံရမယ့်နေရာလေးတွေတအားရှိတော့..မြန်မာလူမျိုးတွေသွားသင့်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ အဲတော့ ဘာလီရောက်သွားတဲ့အခါ..ဘယ်နေရာလေးတွေကို အဓိကထားသွားသင့်ပြီး ဓါတ်ဖမ်းသင့်တာကို မွန်လေးကပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
#Ubud Monkey Forest🐵🙈
Monkey Forest က မျောက်အကောင်ရေအများဆုံးနဲ့ ဘာလီမျောက်တွေကို စနစ်တကျထိမ်းသိမ်းအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့နေရာပါ။ မျောက်တွေက လူယဉ်နေပြီ မြင်မြင်သမျှ လိုက်လုပါတယ်. လုံးဝမကြောက် ဘူး။ အိတ်တွေကို ဖွင့်ပြီးသေချာခိုးတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မျောက် သချိုင်္င်း၊ holly water လည်း ရှိသလို ရေတံခွန်တွေလည်းပောတယ်။ ဒါကြောင့်လည်ပတ်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။
ဘာလီရောက်မှတော့ မသွားမဖြစ်ရောက်အောင်သွားရမယ့် နေရာလေးတစ်ခုပါ။ သူက အ၀င်ဝမှာ အတိုနဲ့ စကပ်တို့ဘောင်းဘီတို့ဝတ်လာတယ်ဆိုသူတို့အ၀တ် ၀တ်ပြီး ခါးမှာ လိမ္မော်ရောင်အစည်းလေးစီးပြီးမှ အထဲဝင် ရပါတယ်။ အရှည်ဝတ်လာတဲ့သူဆိုရင် လိမ္မော်ရောင်အစည်းလေးစီးပြီးတာနဲ့ ၀င်ရုံပဲ။ အထဲမှာ မျောက်တွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ကို မျက်စေ့ဆုံမကြည့်ဖို့နဲ့ သွားမစဖို့ ဂိုက်ကမှာထားတော့ ကိုယ်တွေမှာ ခပ်သွက်သွက်လေး လမ်းလျှောက်၊ အဲ့ Temple မှာပဲနေ၀င်ဆည်းဆာ ကြည့်ပြီး ဘာလီလူမျိုး တွေရဲ့ နာမည်ကြီးရိုးရာအက Kecak Fire အကကို ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာထူးခြားတာက ဘာ တူရိယာမှမသုံးဘဲ ယောကျာ်း အယောက် ၇၀ ရဲ့ ပါးစပ်ကထွက်တဲ့အသံကိုပဲ အသုံးချသွားတာပါ။ ကိုယ်ကြား တာကတော့ ‘ကြက်…ကြက်…ကြက်…ကြက်…ကြက်..ကြက်..ကြက်..ကြက်.. နဲ့ အေးရာ..အေရာ.. အေး ရာ..အေရာ”ဆိုတာပဲ။ ပြဇာတ်အကြောင်း က သီတာ နဲ့ရာမဇာတ်ပါ။ အဲထဲမှာ ဟာနုမာန် မျောက်သရုပ်ဆောင် ထားတဲ့တစ်ယောက်က တော်တော်မိုက် တယ်။ အပေါ်ကနေခုန်ချတာတွေ..မီးတွေဝိုင်းပြီး သူ့ကိုကြိုး တုပ်ဖမ်း ပေမယ့် မီးကိုခြေထောက် နဲ့ကန်ထုတ် တာတွေ…ပရိတ် သတ်တွေကြားထဲသွားပြီး သန်းရှာပေးတာ တွေနဲ့ တ၀ါးဝါး..တဟား ဟားနဲ့ပွဲကို စည်နေတော့ တာ။
#Tanjung Benoa Beach
Water activities လုပ်တဲ့ကမ်းခြေပါ။ အရင်ကဆိုသူက တံငါရွာသာသာပဲ။ ခုကျမှ ဇိမ်ခံဟိုတယ်တွေ၊ ကမ်းခြေမှာ ဆော့ဖို့ water activities တွေလုပ်လာလို့ပိုပြီးစည်ကားလာတယ်ပြောပါတယ်။ ကိုယ်တွေအဖွဲ့ထဲက ၂ယောက်က parasailing adventure လုပ်ပြီး ကျန် ၈ယောက်ကတော့ sea walker လုပ်ကြပါတယ်။ လုပ်လို့ရတဲ့ activities တွေက Parasailing (၁ ယောက်), Parasailing Adventure (၂ယောက်), Banana boat, Jet Ski, Glass Bottom Boat, Donut slider, Diving, Snorkeling, Sea Walker, Jigging Fishing, Fishing, Spear Fishing, Mangrove Tour, Dolphin tour နဲ့ Turtle island တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
#Tanah Lot temple
ပင်လယ်ကမ်းစပ်နားမှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ temple ပါ။ သူက မနက်ဘက်သွားရင်တော့ လူရှင်းပြီး လှိုင်း တွေတ၀ုန်းဝုန်းနဲ့ဓါတ်ဖမ်းရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ prewedding လာရိုက်တာတောင်ရှိတယ်။ ညနေ ဘက်သွား လည်းလှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတွေတော့များတာပေါ့။ သွားတဲ့လမ်းတောက်လျှောက်မှာ ဈေး ဆိုင်တွေအားကြီးပဲ။ ကြုံလို့ shopping လုပ်လို့ရသေးတယ်နော်။
#Wanagiri Hiddne Hill
ဒီနေရာလေးက lake Buyan နဲ့lake Tamblingan ကိုအပေါ်စီး ကနေမြင်ရတဲ့ Muduk Hill ပေါ်မှာရှိတာ။ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ အတွက် လုပ်ထားတဲ့ နေရာသေး သေးလေးလည်းရှိတယ်။ ဒီနေရာက Instagram ကနေစပြီးနာမည်ကြီးလာတာတဲ့။ Swing လည်းလုပ်လို့ ရပြီး ငှက်သိုက်လိုလုပ်ထားတဲ့နေရာလေးတွေမှာ အမိုက်စားဓာတ်ပုံတွေရိုက်လို့ ရတယ်။ Rice Terrace မှာလုပ်ရတဲ့ Bali Swing ထက် ဒီ Lake View နဲ့ swing ကိုပိုကြိုက်မိတယ်။ တောင်ပေါ်ဆိုတော့ လေကတိုက်၊ တိမ်တွေရယ် တောင်တန်းတွေရယ် ရေကန်ကြီးတွေရယ် နဲ့ swing လုပ်ရတဲ့ ဖီးလ်က အရမ်းအရမ်းမိုက်။
မီးတောင်ဒေသဖြစ်တဲ့ Kitamani ကိုသွားပြီး Mt. Batur မီးတောင်အလှကိုကြည့်ပြီး နေ့လည်စာ စားခဲ့ကြတယ်။ စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ အပေါ်ထပ်မှာပဲ မြင်ကွင်းကျယ်ရှိတော့..View ကိုတက်ကြည့်ကြတယ်။ ဓါတ်ဖမ်းဖို့လည်း အလှဆင်ထားတော့ အပြိုင်ဓါတ်ဖမ်းလို့ကောင်းပေါ့။
#Holy Spring Water Temple
Temple မှာ ဘုရားရှိခိုးနေကြတဲ့လူတွေနဲ့ စိတ် အညစ်အကြေးတွေသန့်စင်စေတဲ့ရေနဲ့ရေချိုးသန့်စင်နေကြတဲ့ လူတွေနဲ့ စည်ကားနေရော။ အထဲမ၀င်ခင်အပြင်မှာသူတို့ပေးတဲ့အ၀တ်ပတ်ရတယ်။ အဲမှာရေချုိုးရင်ဆုတောင်းပြည့်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ရာသီလာနေရင်တော မဆင်းတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
#Sebatu Coffee ခြံ
ကြောင်ချီးကော်ဖီထုတ်လုပ်တဲ့ Sebatu Coffee ခြံကိုသွားလည်ကြပြီး ကော်ဖီတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက် မြည်းစမ်းကြည့်ပါ။ ပြီးရင်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အရသာကော်ဖီအတိုင်းလက်ဆောင်ဝယ်သွားလို့ရတယ်။
ဒီကျွန်းက Sanur Beach လှေဆိပ်ကနေ fast boat စီးပြီးသွားရပါတာပါ..၄၅ မိနစ်-၁ နာရီလောက် တော့ စီးရတယ်…Nusa Lambogan, Nusa Ceningan, Nusa Penida ဆိုပြီး ကျွန်း ၃ခုရှိတဲ့အထဲကမှ Nusa Penida ကတော့ အကြီးဆုံးပဲ။ ဒီကျွန်းလည်း Instagram ကနေစပြီးနာမည်ကြီးလာတာ ၄နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ နေ့ချင်းပြန်သွားလို့ ရသလို Hotel တွေ resort တွေရှိတော့ ကျွန်းပေါ်မှာ ညအိပ်လို့ လဲရ တယ်။ နေ့ ချင်းပြန်သွားမယ်ဆိုရင် လှေဆိပ်ကနေ မနက် ၇ခွဲ ၈နာရီ ၈ခွဲ စသည်ဖြင့်ထွက်ပြီး ညနေဆို ၄နာရီ၊ ၄ခွဲကျွန်းကနေပြန်လာတယ်။ ကျွန်းပေါ်ကလည်မယ့်နေရာတွေကိုတော့ကားနဲ့သွားရပါတယ်။ tour agency တွေကနေ package လိုက်ဝယ်ရင် Kuta area တို့ Legian area တို့ ကိုတော့ ဟိုတယ်ထိလာခေါ် ပြန်ပို့ ပေး ပါတယ်။ မဟုတ်လဲ Sanur Beach ကလှေဆိပ်ကို ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ သွားပြီးဟိုရောက်မှ fast boat ticket ၀ယ်ပြီးသွား လို့ ရတယ်…ကျွန်းပေါ်မှာ အဓိကလည်တဲ့နေရာတွေက
– Angel’s Billabong
– Keling King Beach
ဒီနေရာ Handara Golf Resort ရဲ့ ဂိတ်အပေါက်ဝပါ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်လှလို့လာရိုက်ကြတဲ့သူတွေတော်တော်များတယ်။ ခရီးသွားများကို အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံး နေရာများထဲမှ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေ ရိုက်ရတာဝါသနာပါတဲ့ photography lover တို့အတွက် အလည်ပတ်သင့်ဆုံးနေရာလေးတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
#Ulun Danu Temple
တောင်ပေါ်ဆိုတော့ ရာသီဥတုအရမ်းကောင်းတယ် လေတဖြူးဖြူးနဲ့ အေးနေတာပဲ။ Lake Bratan ရယ် ရေကန်တွင်ဘာလီရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအရ ရေစောင့်နတ်သမီးကို ပူဇော်ပသတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာ ရွှေငါးလေးတွေနဲ့ ကြာပန်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ မသွားမဖြစ်ပါ။
#GWK Culture Park
ခမ်းနားတဲ့ ဗိသုကာတွေကို တန်ဖိုးထားတယ်။ အနုပညာလက်ရာတွေနဲ့ ဘာလီရဲ့ ထည်ဝါမှုကို ရည်ညွှန်းဖော်ဆောင်နေတဲ့ နေရာကိုသွားချင်ရင်တော့GWK cultural Parkကိုသွားပါ။ ကြီးးမားတဲ့ရုပ်ထုကြီးများရှိပြီး သမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့..ဘာလီကိုတော်တော်လေးစုံသွားပါပြီ။ ဒါတောင်ကျန်သေးတာနော်.အပေါ်မှာမွန်လေးဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့နေရာတွေက.မြန်မာလူမျိုးတွေကယ်ကိုသွားသင့်ပြီးဓါတ်ဖမ်းသင့်တဲ့နေရာတွေမို့..ရှာဖွေပြီး ဖော်ပြပေးတာပါ။ အတူတူသွားချင်ကြတဲ့သူတွေရှိရင် အောက်မှာ mentionခေါ်ပေးကြဦးနော။
Shar Thet Man has written 336 post in this Website..
ဘာလီ ဟာ တစ်နေ့ သွားကိုသွားရမယ့် နေရာဆိုတော့ ။
Information အတွက် ကျေးဇူးပါ ။
Travel & Tourism Sector က လူတွေကို သိပ်အားကျတာဘဲ ။
အခုနေသာ ဘဝကို ပြန်စလို့ရရင် အဲ့ဒီအလုပ်ကို ရွေးမိမှာဘဲ ။
ပိုက်ပိုက် မကုန်ဘဲ လျှောက်လည်နေရတဲ့ ဘဝ ။ မိုက်စ် ။
အမလေး….ပိုက်ဆံကုန်တာပေါ့…မကုန်ဘဲဘယ်နေပါ့မလဲ….ပိုက်ဆံဆိုတာ မိုးပေါ်ကကျတဲ့အရာမှမဟုတ်တာ..tour leader ဆိုတမျိုးပေါ့လေ…များသောအားဖြင့်ကိုယ့်ဖာသာသွားတာပဲများပါတယ်…ကိုယ့်ဖာသာအိတ်စိုက်တာပြီးတော့ပေါ့